Wararka Maanta: Jimco, Jan 24, 2014-Wasiir Guraase:" waxbarashada Soomaaliya waan tayeyn doonaa"
Mudane Axmed Maxamed Guraase
Wasiir Guraase oo ugu horeyn aan wax ka weydiiney xilka loo magacaabay iyo sida uu arko, ayaa sheegay inuu si aad ah ugu faraxsan yahay xilka loo dhaariyey, isagoo intaas ku daray in xilkaasi uu yahay mid culus oo mas'uuliyad dheeri ah u baahan, wasaaradda waxbarashaduna ay kamid tahay wasaaradaha ugu shaqada adag dhammaan wasaaradaha.
Mar uu ka hadlayey qorshaha wasaaraddiisa wuxuu sheegay in ay jiraan dhinacyo gaar ah oo ay wasaaraddu dhowrka sano ee socda si gaar ah diiradda u saari doonto. Arrimaha uu soo hadal qaaday waxaa kamid ah: sameynta manhaj waxbarasho oo dhameystiran, sameynta shahaado mideysan oo caalamka laga aqoonsan yahay iyo weliba sidii dib loogu howlgelin lahaa dugsiyadii dowladda.
Dhammaan gobollada dalka ayuu sheegay in wasaaraddu ay ka furan doonto xafiisyo fududeeya howlaha wasaaradda, isagoo sidoo kale sheegay in waxyaabaha u qorsheysan ay kamid tahay hirgelinta barnaamijyo waxbarasho oo lagu gacan qabanayo ardeyda aan awoodin inay kharashka waxbarashada iska bixiyaan.
Wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Axmed Maxamed Guraase wuxuu si rasmi ah xafiiska ula wareegi doonaa maalinta Isniinta ee taariikhdu ay ku beegan tahay [Janaayo 27, 2014].
Waxbarashada Soomaaliya ayaa si aad ah hoos ugu dhacday muddada labaatanka sano ka badan ee dalku uu burburka ku jirey, inkasta oo ay jireen dadaallo ay sameeyeen aqoon-yahanka Soomaaliyeed si loo buuxiyo kaalinta dowladda iyagoo furay kumannaan dugsi, macaahid iyo jaamacado ay tiradoodu boqol ku dhow dahay.